Wadahadalladii ururka shaqaalaha gaadiidka oo lagu guuldarraystay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wadahadalladii ururka shaqaalaha gaadiidka oo lagu guuldarraystay
Publicerat fredag 5 april 2013 kl 12.24
Ururka shaqaalaha gaadiidka ee loo yaqaan Transport ayaa ku guuldarraystay wadahadaladii uu ku doonayey heshiis cusub oo khuseeya 40000 oo qof oo isugu jira dareewallo iyo shaqaalaha xarumaha gaadiidka.
Ururka Transport wuxuu ka mid yahay ururada ku tirsan dallada LO oo diiday heshiiskii wershadaha oo ahaa in mushaharka lagu kordhiyo boqolkiiba 6,8 muddo saddex ah. Ururka Transport wuxuu doonayaa in muddo hal sano ah mushaharkooda loogu kordhiyo 860 karoon bishiiba.
Hoggaamiyaha ururka Transport ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in uu ku baaqo tallaabooyin shaqa-joojin ah. Waxaa sidoo kale istaagay wadahadaladii ay 4000 oo ah shaqaalaha nadaafaddu ku doonayeen heshiis cusub.